Hoyga > Wararka > Wararka warshadaha > Qalabka qalabka guryaha ee xafiiska ayaa u baahan inay isticmaalaan maxay?
Qalabka qalabka caaga ahwaxaa badanaa loo isticmaalaa nolosha, qalabka guryaha qaarkood ayaa la isticmaali doonaa, laakiin sidoo kale door aad u muhiim ah, qalabka guryaha ee xafiisyada badanaa waxaa loola jeedaa qalabka guryaha ee ku habboon xafiiska, rakibida iyo soo saarista wali waxay u baahan yihiin qaar ka mid ah taageerada qalabka, ka dibna qalabka qalabka guryaha ee xafiisku wuxuu u baahan yahay inuu isticmaalo waa maxay?
Waxa ugu muhiimsan qalabka guryaha ee alaabta guriga waa isku xirnaanta. Alaabtaan waxaa badanaa loo isticmaalaa isku xirka salka alaabta guriga. Dabcan, tayada badeecada sidoo kale waa mid aad u sareysa, oo xiriir weyn la leh adeegsiga dambe.
Xaqiiqdii, waxaa jira qalab muhiim ah oo ku saabsan alaabta guriga waa qufulka iyo qabashada, qufulka iyo gacan qabashada uma baahna inaan soo bandhigo, tani waa lagama maarmaan u ah qalabka guryaha, qufulka ayaa hadda ku jira suuqa oo leh quful elektiroonig ah iyo furaha furaha, waxaa jira dad badan noocyada gacanka, waxaad dooran kartaa iyadoo loo eegayo shuruudaha iyaga u gaarka ah.
Qalabka qalabka guryaha ee xafiiska waxaa ku jira isbarbardhig, khaanadda khaanadda ayaa loo baahan yahay in lagu duldego, iskuuladana guud ahaan waxaa laga sameeyaa caag, tayo ahaan illaa iyo inta aynaan si ba'an u isticmaalin tayada ma lahan dhibaato intaas la eg.
Alaabta xafiisku waxay kuxirantahay baahida loo qabo istaagida iyo qasriga, alaabadaani waxay yeelan karaan saameynta go'an, la dhigo qolka sidoo kale uma muuqan doono waxyeello waxyeello ah, habka wax soo saarka alaabada xafiiska sidoo kale waa gaaban yahay wax yar, laakiin markaan dooro sumad wanaagsan oo ku jirta tayada qafiska cagaha sidoo kale waa mid aad u wanaagsan, nooca faraskuna waa mid aad u gaar ah oo cusub, midab badanna u leh shirkadda.
Kala soocida qalabka qalabka guryaha ee xafiiska:
Marka loo eego kala soocida walxaha:zinc alloy, alloy aluminium, birta, caag, bir birta ah, PVC, ABS, copper, nylon, iwm
Marka loo eego shaqada kala soocidda:qalabka dhismaha ee dhismaha: sida qaab dhismeedka birta miiska shaaha dhalada ah, lugta birta ee miiska wareega iyo wixii la mid ah
Qalabka guryaha ee shaqeynaya:haddii aad fuusho faras si aad u sawirto, fiiqan, 3 hal xabbo oo isku-dhafan, gawaarida gawaarida, guddiga lakabka ayaa qabta daqiiqad
Qalabka guryaha ee qurxinta:sida aluminium geeska, birta ku xir, birta gacanta iyo wixii la mid ah
Qalabka qalabka guryaha ee xafiiska inta badan waxaa ka mid ah fur, qoryo, fiiq, fiiq, gacan qabasho, isbarbar dhig, pin diaphragm, qalabka wiishka, ciddiyaha, mashiinka cinwaanka, mashiinka rogrogmada mashiinka, mashiinka wareejinta, cagaha biraha, birta birta ah, gacanka biraha, wheel, wheel, zippers, usha pneumatic, ilo, makiinado, qalabka guriga, khaanad, tareenka hagaha, birta, dambiisha jiidan, baarka laalaada, saxanka, dambiisha, toogashada nalka, sabuuradda, mindi iyo saxanka fargeetada, qafiska taleex, khaanadda shaqooyinka badan, golaha wasiirada isku darka
Maalmahan, qalabaynta qalabka guryaha waa mid aad iyo aad u soo jiidasho badan macaamiisha, shirkad kasta oo qalabka guryaha ah waa inay qabataa isbeddellada suuqa, ka faa'iideysataa isbeddelka iyo qalabka.
Hore:Alaabta guryaha ka samaysan ee caaga ahi waxay noqdeen xoog ku cusub warshadaha qalabka guryaha
Xiga:Intee in leeg ayaad ka ogtahay astaamaha qalabka guryaha lagu xidho?